Efa fantatray ny vidin'ny Samsung Galaxy S7 sy Galaxy S7 Edge | Androidsis
Omaly Samsung dia afaka nilaza isika fa somary mifintina amin'ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S7 vaovao anao raha ampitahaintsika amin'ny fanambaràn'ny LG G5. Fantatr'i Samsung fa nanatsara ny endri-javatra sasany amin'ny sainam-pirenena vaovao izy ary mampiasa ireo fiasa ireo ihany koa hanombohana ity terminal vaovao ity izay mety ho ny firaisana amin'ny tsara indrindra amin'ny Galaxy S5, miaraka amin'ny fanohanan'ny slot microSD sy ny fanoherana ny rano, ary ny Galaxy S6, miaraka aminy endrika manokana amin'ny endriny farany sy ireo andalana vaovao nahagaga ny rehetra. Raha manampy fihatsarana amin'ny bateria isika, raha toa ka tsy misotro azy ny efijery "Eo foana", ity Galaxy S7 vaovao ity, miandry ny hevitra, dia mety ho laharana ho iray amin'ireo finday avo lenta finday avo lenta amin'ny andro farany. Ny marina dia mila ho toy izany i Samsung raha jerena ny fahasahiranan'ny tsena amin'izao fotoana izao.
Samsung Galaxy S7 dia smartpohne miaraka aminy 5.1 efijery famahana Quad HD, Exynos 8890 puce valo-core, 4 GB RAM, 32 GB fitehirizana anatiny hatramin'ny 200 GB amin'ny alàlan'ny microSD, bateria 3.000 mAh, fakan-tsary 12 MP f / 1.7 aoriana misy horonantsary horonantsary 4K ary MP 5 eo alohan'ilay vava f / 1.7. Tokony holazaina fa hananantsika etoana ilay kinova miaraka amin'ny puce Exynos, satria ilay amerikanina no ahazoana puce Snapdragon 820 lehibe. Ankoatra ny manoloana ny chip tsara kokoa miaraka amin'i Qualcomm sy ny fanatsarana ny fahombiazan'ny angovo, fananana Exynos dia mahatonga azy ireo ROM tsy azo atao toa ny CyanogenMod azo apetraka. Na izany aza, ho eo alohan'ny telefaona mahafinaritra ihany isika.
Vidin'ny Samsung Galaxy S7
Na dia somary hafahafa aza isika tsy afaka manana ny kinova Snapdragon 820 izay azo antsoina ho toy ny smartphone tonga lafatra izy io, ilay mpampiasa izay mamaky ilay boaty ho an'ny Galaxy S7 sy ny vidiny € 719 amin'ny kinova 32GB, izay no hananantsika voalohany, dia hahazo Gear VR maimaimpoana rehefa manomboka zaraina amin'ireo mpampiasa izy tamin'ny 8 martsa.
Io Gear VR io irery dia mila telefaona hahafahana manao azy mahazoa ny zava-misy iainana virtoaly feno, na dia amin'ny vidiny € 99 dia safidy mividy tsara ny mandray azy ho toy ny kojakoja manokana ho an'ny mpampiasa manaiky ny hividy ny Samsung Galaxy S7 sy ny Galaxy S7 Edge.
Afaka mahazo ny sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa Koreana tsy maintsy mamaky ny tranonkala ofisialiny ianao ary ireto ny vidiny:
Samsung Galaxy S7: 719 euro
Samsung Galaxy S7 Edge: 819 euro.
Ny sisa amin'ireo kinova dia azo alaina amin'ny 11 martsa miaraka amin'ny 64 sy 128GB ho toy ny safidy fividianana lehibe izay ahafahantsika manampy izany fanohanana izany amin'ny microSD.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Efa manana ny vidin'ny Samsung Galaxy S7 izahay, efa azo amidy mialoha
Trellat dia hoy izy:
Vaovao tsara fa naverin'izy ireo ny slot ho an'ny karatra sd ... tena ilaina tokoa satria maro ny sary / horonan-tsary nalaina ary manana kalitao ambonimbony izay mitana ny azy manokana
Mamaly an'i Trellat